नन्द भाउजुलाई मोटरसाइकलमा लिफ्ट दिएपछि युबतिको ‘ नाटकीय बलात्कार ‘! बलात्कार हो कि यौन सम्पर्क ? हेर्नुहोस अनौठो घटना | DON Nepal नन्द भाउजुलाई मोटरसाइकलमा लिफ्ट दिएपछि युबतिको ‘ नाटकीय बलात्कार ‘! बलात्कार हो कि यौन सम्पर्क ? हेर्नुहोस अनौठो घटना – DON Nepal
Home घटना नन्द भाउजुलाई मोटरसाइकलमा लिफ्ट दिएपछि युबतिको ‘ नाटकीय बलात्कार ‘! बलात्कार हो कि यौन सम्पर्क ? हेर्नुहोस अनौठो घटना
By Don NepalJun 20, 2018, 19:01 pm0
जलविरे इ’ प्रहरीले राखेको काल्पनिक नाम । उनी मेलम्चीमा रहेको आफन्तको होटलमा काम गर्दै आएकी थिइन् । असारमा काम गर्ने मान्छेको अभाव भएपछि नन्दलाई लिन भाउजू मेलम्ची पुगिन् । नन्द ‘जलविरे इ’ र भाउजू ‘जलविरे ए’ एउटा भाडाको गाडीमा पछाडि बसेर नवलपुरसम्म पुगे ।
युवतीसँग जर्बजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि ती युवतीकी भाउजूसँग पनि यौन सम्र्पक राख्ने योजनाका साथ बाइकमा राखेर त्यही होटलमा ल्याएको स्थानीय प्रहरीको दाबी छ ।
सँगै आएकी भाउजूलाई बाइकबाट ओरालेपछि ती युवकले युवतीलाई लिएर गएको होटलसम्म पुग्न करिब ५ मिनेट मात्रै लाग्छ । थोरै समयको बीच मोटरसाइकल चालक र युवतीबीच धेरै कुराकानी हुन नपाए पनि युवतीलाई होटलमा लगेर युवकले जर्बजस्ती गरेको बताउँदै डीएसपी कँडेलले भने- अस्पतालमा लगेर शारीरिक परीक्षण गर्दा युवती बलात्कृत भएको पुष्टी भएको छ ।’
यसैबीच लिफ्टमा आएकी युवतीलाई जर्बजस्ती करणीको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका अभियुक्त नेपालले आफुले ती युवतीसँग यौन सम्र्पक राखेको स्वीकारेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा म्याद थप्न लैजाने क्रममा पनि नेपालले सम्बन्ध राखेको स्वीकार गरेका हुन् । त्यस्तै प्रहरीसँगको मौखिक बयानका क्रममा पनि आफूले सम्बन्ध राखेको स्वीकारेको डीएसपी विमलराज कणेलले जानकारी दिए ।
मैले तिमीहरुलाई सहयोग गरें, तिमीले चाँही के सहयोग गर्छाै त भनेर अभियुक्त नेपालले ती युवतीसँग प्रस्ताव राखेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । नेपालले यौन सम्र्पकको प्रस्ताव राखेका थिए ।
अभियुक्तको दाबी अनुसार युवतीले पनि स्वीकारेकी थिइन् । ‘सुरुमा सहमतिमा नै सम्बन्ध भएको देखिन्छ, तर पछि भाउजू आएपछि विवाद भएको देखिन्छ’ प्रहरी स्रोतले भन्यो । अनलाइन खबरबाट
Previous Postविवाह पछि राउटेहरुको सुहागरात कहाँ अनि कसरी हुन्छ ? थाहा पाउनुस अनौठो चलन Next Postभाग्यशाली युवतीहरूको यी अंग ठूला र लामो हुन्छन्, जान्नुहोस….